Tickle & Woo Zvaunotarisira! | Martech Zone
Tickle & Woo Zvaunotarisira!
China, November 7, 2013 Muvhuro, Mbudzi 25, 2013 Douglas Karr
Mabhizinesi mazhinji kune bhizinesi (B2B) yekutengesa macircuit akareba uye akaomarara. Chiyero chekuchengeta kumusoro kwepfungwa netarisiro kusvikira danho rekutenga raitwa uye kwete kuvabaya uye kuvadzinga. Ndakaona vamwe vanhu vachirera zvinotungamira mushe mushe, uye ndaisa "Usapindure" mubhuku rangu renhare kuti ndidzivise vanhu vanotengesa vasingadaro.
Tsvagiridzo inoti kuzivisa tarisiro kunodhura $ 443 uku uchishanyira imwe inomhanya $ 596. Sei uchivarega vachikukurwa? CEIR, Chirevo SM37, 2009
Tickle & Woo ine nzira yakasiyana zvachose. Sarudza kubva pane dzinoverengeka zvido zvako uye wobva 'nyorera' kune Tickle & Woo's sevhisi. Vachatumira Tickle Bhokisi kune yako tarisiro mwedzi wega nechimwe chinhu chinotonhorera mairi chavanofarira. Rakadhindwa papakeji irogo yako neruzivo rwekutaurirana - zvichipa mukana mwedzi wega weiyo tarisiro yekukuchengetedza kumusoro kwepfungwa.
Heino pfupiso ye kuti inoshanda sei!
Unogona kusarudza kamwe-nguva kutumira, kunyorera kwemwedzi mitanhatu, kana kunyorera kwemwedzi gumi nemaviri - zvese pasi pemadhora makumi matatu pamwedzi pamunhu anogamuchira. Ivo zvakare vane tsika
Tags: kutungamirira kutarisirakusimudziratariroRelationshipsfamba uye woofadza woo
Nov 8, 2013 pa8: 12AM
Tickle & Woo Inonzwika senge "haigone kurarama pasina ichi" sosi yekutengesa maneja. Ndinofanira kuwana kunyoreswa kwechikwata changu chekutengesa. Ndingafarire kuziva kuti vamwe vari kuwedzera sei kutengesa.
Mbudzi 23, 2013 na6: 37 PM
Ida iyo 🙂 Ndinoda kuona Tickle & Woo ichishanda neMailLift 🙂